Google yakabhadhara marekodhi emamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu neviri EU neEU
Blog » Google yakabhadhara marekodhi emamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu neviri EU neEU. Uku kunongova kutanga chete, zvimwe zvirango zviviri zvinogona kuiswa.
Google yakabhadhara marekodhi emamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu neviri EU neEU. Uku kunongova kutanga chete, zvimwe zvirango zviviri zvinogona kuiswa.
Zvinoenderana nesarudzo yeKomisheni yeEuropean, Google inofanira kubhadhara mubairo weEUR 2,42 bhiriyoni yekutyora mutemo weantitrust.
European Commission inoti Google yakashandisa zvigadzirwa zvayo zveGoogle Shopping mumhedzisiro yeinjini yekutsvaga yeGoogle kukuvadza kwevamwe vanopa zvinhu. Zvinongedzo kune zvigadzirwa zveGoogle Zvekutenga zvaive uye zviri pamusoro pekutsvaga peji peji, nepo nzvimbo dzemakwikwi ezvesevhisi sekutariswa neGoogle yekutsvaga algorithms inongoonekwa pane yakaderera nzvimbo.
Mukati memazuva makumi mapfumbamwe Google Google ichafanira kuchinja ayo ekutsvaga algorithm mamiriro ehurongwa. Zvikasadaro, chirango chichaiswa kusvika kusvika pa90% yeavhareji zuva nezuva kutengesa kweAlfabeti, kambani yevabereki veGoogle.
European Commissioner yeMakwikwi Margrethe Vestager akataura kuti zvakaitwa neGoogle zvisiri pamutemo pasi pemutemo weEU antitrust. Nechisarudzo ichi, chinyorwa chakatemerwa kuongororwa mune ramangwana.
European Commission inoongorora dzimwe mhosva mbiri umo Google yavanoti vanoshandisa zvisizvo mitemo yemakwikwi mumusika wemahara: iyo Android yekushandisa system uye AdSense.
Previous Post European Commission inoda vanyamuti kuti vavazivise nezve zvivakwa…
Next Post Rotterdam harbor uye TNT mubatwi wepasi rose hacker kurwiswa